Ny iray kosa no nahazo sazy herintaona sazy mihantona, araka ny didim-pitsarana omaly. Tetsy an-kilany, namoahan’ny minisitry ny atitany Razafimahefa Tianarivelo avy amin’ny MAPAR didy tsy fahafahana mivoaka ivelan’i Madagasikara na IST i Mbola Rajaonah, Harry Laurent Rahajason, Fidèle Razarapiera ary Faniry Ernaivo ny talata 8 janoary fotoana namoahana ny valim-pifidianana ofisialy. Tsara ny manamarika fa efa notorian’ny Primatiora koa ry Hanitra Razafimanantsoa, James Ratsima, Fernand Cello ary Ninie Donia. Ny resaka fitakiana ny fahamarinana teny amin’ny 13 mey, izay nilazana azy ireo ho manohintohina ny filaminana sy ny fiandrianan’ny firenena no anton’ny fanenjehana. Matoa ny olona hamoahana ireny dia atahorana hitsoaka any ivelany noho ny raharaha hanenjehana azy. Ny 9 janoary teo dia nampanantsoina teny amin’ny Toby Ratsimandrava Atoa Mbola Rajaonah sy Rolly Mercia ary efa natao fanadihadiana ihany koa ny mpanao gazety Fernand Cello. Omaly ihany koa no tonga niatrika ny fanadihadiana azy i James Ratsima sy Ninie Donia. Hohenjehina sy hopotehin’ny fanjakana Rajoelina hatramin’ny farany ve izany izy ireo noho safidy politikany ? Tsara ny mampahatsiahy fa tsy vao izao ny fifanolanana teo amin-dry Rolly Mercia sy Fidèle Razarapiera an-daniny ary Rajoelina sy ny ekipany an-kilany, fa nanomboka tamin’ny fisarahana ka nisafidianan’ireto farany niara-dia tamin’ny fanjakana Rajaonarimampianina. Nitohy tamin’ny fifanomezan-tanana tamin’i Marc Ravalomanana taty aoriana. Hizotra mankany amin’ny fanenjehana ireo tsy mitovy hevitra dieny ety am-piandohana izany Rajoelina mba ho fampitahorana ny hafa ? Ny fampahalalam-baovao akaiky an-dRajoelina rahateo dia efa milaza fa manantontanona azy ireo ny varavaran’i Tsiafahy. Andrasana ny fampitan’ny mpitandro ny filaminana ny raharaha eny amin’ny fitsarana ahitana ny tohiny.